Dowlad Wanaag - Wikipedia
Dowladnimada Marka laga hadlaayo culuumta siyaasada waxaa lagu qeexaa in ay tahay hanaan maamuleed oo bulsho ay baahi u qabto oo kala haga danahooda bulshadeed mid dhaqaale iyo siyaasad iyo kuwo kaleba. Waa hanaan qorsheeya go’aanka gaarida tartan loo maro cadaalad iyo go’aan wada jira xageeda hogaanka. Dowladnima ayaa noqoneysa mid caalami ah mid dal iyo mid deegaan. Xukuumad ahaana waxaa loo qeybin karaa heer dhexe, gobol & mid hoose. Hey’adaha hogaamiyana waxaa loo kala saari karaa kuwo sharci dejin (parliament), fulin (Cabinet) & garsoor (Judiciary). Xukuumada waxeey qeyb weyn ka tahay jilayaasha dowladnimada. Marka laga tago intaan oo idil iyo ciidamada noocyadiisa kala duwan oo xukuumada hoostaga waxa kale waxey soo hoos imaanayaan bulsha weynta rayidka ah.Dowlada hoose ayaa ah jilaha ugu hooseeya oo si xor ah loo soo doorto ayaa wax badan oo adeeg ah u qabato bulshada waxaana ka mid ah bixinta dhulka, canshuuraha guryaha iyo ganacsiga iyo adeegyo amni iyo caafimaadba. Maamul dowladeedku ayaa lagu dhex fulin karaa ama soo hoos geli Kara dal, ganacsi, balse hanaanka maamuleed ee lagu howlgalo, go’aanadana lagu fuliyo loo dejiyo sidoo kalana lagu hergeliyo ayaa la yiraahdaa hanaan dowladeed (governance). Ereyga asal ahaan iyo siyaasad ahaan waxaa curiyay Plato oo ahaa aabahii siyaasada reer galbeedka oo Gariik u dhashay. Ujeedada ugu weyn ee dowladi u taagan tahay ayaa ah in ay hubiso, ka shaqeeyso sidoo kalana keento in bulshada ey u taliso ee dowlada u tahay ay nolol wanaagsan u keento kana ilaalido nolosha xun ee dhibka badan. Siyaabo badan ayaa loo micneeyaa maamulka ama hanaan dowladeedka Bangiga aduunka wuxuu ku macneeyaa habka awooda dhaqaale & dowladeed loogu adeegsado horumarinta busho in ay tahay hanaan dowladeed ama maamulka dowada. Dowladnimada iyo siyaasada waa kala duwan yihiin inkasta oo ay hadana isku dhow yihiin oo xiriir ka dhexeeyo. Dalka, dowlada & dadka waxaa ka dhexeeyo xiriir isku xiran oo dad iyo dowlad la’aan dal ma jiri karo sidoo kalena dowlad iyo dal la’aan dad ma jiri karo marka la helo dhul ay dadka si wada jir ah ugu wada noolaadaan ayey imaaneeysaa hanaankii lagu wada noolaan lahaa waxaana ay noqoneeysaa qofku bulsho la’aan iyo maamul la’aan ma noolaan karo waana tii Aristotle yiri sidaas. Dalku waa wax dabiici ah sidoo kalana lagama maarmaan ah sidaasna dadka ayaa u baahan in si ay baahidooda kala duwan ugu qanciyaan uguna noolaadaan. Micnaha uu raashiinka u leeyahay qofka ayuu mid la mid ahna u leeyahay bulshada in ay yeeshaan dal ay ku noolaadaan. Dalkeena soomaaliya in mudo ahba masoo marin dowlad guun ah oo waqti badan jirtay sidoo kalena kuma baraarugsana dadkeena qiimaha iyo micnaha ay dowladi u leedahay shacabkeeda. Bulshadeenu waxeey aheyd mid ku dhisan maamul qabiil oo aan laheyn maamul dowladeed mideysan oo magac soomaaliyeed leh oo muuno, sharaf, magac weyn leh. Reer walba wuxuu lahaa dhul u gaar ah odayaal garta u gala reerka oo talada ka go’do dhalinyaro reeraha u ah laf dhabar marna difaaca marna geela raaca oo ubadka yar koriya sidaa ayuuna reer walba ku ahaa dalka. Waxaa maamul ugu horeeysay soomaali markii gumeystaha yimid dalka. Ka hor waa jireen maamulo yar yar iyo boqortooyooyin ka jiray Gobolka Mudug iyo Bari, Shabeelaha hoose, Banaadir sidoo kale Ugaasyo ka talin jiray gobalka Hiiraan iyo Shabeelada dhexe meelo kalena waa ka jireen maamulo balse ma aheyn mid lagu mideeysan yahay oo magac soomaaliyeed iyo hogaan leh. Dowlad iyo maamul soomaali lahaa waxaa ugu horeeyay midkii Sh.Cali jimcaale & Cabdulaahi Ciise hormuudka ka ahaayeen iyo sidoo kale dowladii Aadan Cabdule Cusmaan. Hanaankii dowladnimo ee dalka ka jiray wuxuu kacaa kufaba ugu dambeynti waa soo afjarmay kadib markii dalka uu u gacan galay awood milatari oo kali talis ah. Kadib labaatan sanno oo waxaa dalku uu galay burbur iyo dagaalo sokeeye ah.
Falsafada Dowladnimo[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Fikradaha siyaasadeed si guud ahaan ah waxeey kasoo baxeen maskaxda ama aqoonta & waayo aragnimada qof mararka qaar laga yaabo aan diin ama dhaqan wadaagin markaan falsafad ahaan waxaa dhalan karta in ay ku xiran tahay fikradaa diinta uu aaminsan yahay ama dhaqankiisa. Fikrahaan bulshadeed ama siyaasadeed ama dhaqaale ayaa ah kuwo lagu kala gedisan yahay waxeeyna badanaa wataan sabababeyn ama doodo waaqici ah oo caqli gal ah sidoo kalena daldaloolooyin. Aragtiyo badan iyo fekrado ayaa jira dhamaan culuumtan aartska ah. Waxaana la yiraahdaa hadii su’aa fasafeed la is weeydiiyo ma jirto jawaab falsafadeed oo ay leedahay. Dhamaan waxa la raadinaayo waa wanaaga bani aadamka iyo waxa u dhow cadaalada iwm.
Aragtida dowladnimada waa aragti ku saleysan yaa xaq u leh in uu wax maamulo, qaanuun dejiyo iwm. Sideese loo qeybsan doonaa ama loo qeybsanayaa waxa dowladnimad ay keento ee awood ah ama dhaqaale ah, magac ah, fursado ah maamuus ah oo dowladu keento.
Falsafada dowladnimo ama siyaasadeed waxaa kor u qaada oo buunbuuniya umadaha markaa jira ee ay kasoo dhex baxdo sidaa darteed ayaa dimuqraadiyada hanaanka ahi u noqday mid caan ah oo idaacadaha ka hadlaan aadna loo buunbuuniyo in uu guul u yahay hanaan dowladnimadeedka jira caalamka. Horumarka dad gaaro iyo hanaanka dowladnimo ee ka jira dal iskuma xerno oo waa la gaari karaa horumar iyadoo hanaanka dowladnimo yahay mid faashil ah.
Waa Maxay Dowlad Wanaag?
Dowlad wanaaga waa hanaan dhaqaalaha, siyaasada iyo maamulka dal uu maro meel la dhihi karo waa mid hufan oo cadaalad leh oo xisaabtan uu ku jiro go’aan qaadashada iyo hergelintada siyaasadaha dowladeed. Sidoo kale dhamaan codka qofka awooda leh iyo qofka aan awooda laheyn waa la maqlaa marka ay noqoto qorsheynta, qiimeynta & hergelinta intaba.Dowlada wanaagsani waxey xiriir la leedahay suuqyada ganacsiga, bulshada rayidka ah, dalalka deriska ah, caalamka & hey’adaha caalamiga ah. Dowlada wanaagsani waa mid ka fog masuqmaasuqa waa mid leh xisaabtan oo waxaa loo baahan yahay in la is weeydiiyo su’aalahan Maxaa qabsoomay? Maxaanse qabsoomin? Maxayse u qabsoomi waayeen? Maxaan saxnay? Maxaanse khaladnay? Maxaan fulinay? Maxaase dhiman? Ma gaadhnay ujeedooyinkeenii? Mise wali waxbaa hadhay? Maxaa laynagu dhaliilayaa? Maxaa ka jira? Maxaanse ka qabanay? Maxaan khasaarnay? Maxaanse faaiidney? Maxaa kharasha oo baxay? Muxuu ku baxay? Maxaase loo bixiyay?
Dowlada wanaagsani waa mid leh asbaabahaan soo socda
In dowladu tahay mid muwaadin walba rag iyo dumar uu xaq u leeyahay ka qeybqaadashadeeda go’aanada,ka hadlideeda, ogaashaheeda, iyo in laga helo cadaalad si siman hadii ay noqoto in maamulka, shaqada iyo mansab walba oo siyaasadeed la Qabto. In dowladu leedahay sharci iyo qaanuun sidoo kale kala dambeyn bulshada dhexdeeda ah. Waa in uu jiraa sharci u kala dabqaada dadka oo u cadaalad fala oo ku dhisan rabitaankooda ka soomaali ahaan Sharcigeena waxaa wanaagsan inuu noqdo mid ku saleysan diinta islaamka. Waxaa wax laga xumaado ah sharci aan damaanad qaadi Karin cadaalad. In dowladu noqoto mid aqbaarteeda ku gudbisa idaacada si loo arko, loo maqlo, loona fahmo go’aanada ay qaadaneeyso, sharciga in ay kusocoto iyo inkale iyo hergelinta wixii ay hore u balanqaaday. Taa waxeey ka hortagi kartaa masuqmaasuqa. Dowlada wanaagsani waa mid go’aanada ku qaadata si wadajir ah mararka qaarkoodna afti dadweyne kadibna meelmarida Dowlada wanaagsani waa mid lala xisaabtami karo oo u furan su’aalo weydiin, dood, iyo in wax meel la isla meel dhigo wixii qaldana la saxo. Dowlada wanaagsani waxeey bulshada u abuurtaa hiraal, ka dhaadhicidaa, ka gadaa hiraalkaa. Dowlada wanaagsani dadkeedaa aaminsan, waa mid loo jeedo meesha ay u socoto, mid qaadata go’aana wanaagsan oo shaqadeeda dadweynaha qiimeeyo mustaqbalkana keenta guulo iyo horumar la taaban karo. Dal majiri karo dowlad la’aan. Dowladu waa muhiim in ay heshaa ama leedahay dad isku xeran oo leh qaanuun, sharciyo & nidaam. Xurnimo waa in sidoo kale ka jirtaa gudaha iyo debada dalka tusaale ahaan in awaamiirta dowladeed loo hogaansamo dalka gudahiisa iyo debadiisaba. Waxaa kale oo muhiim ah in aysan jirin farogelin shisheeye. Waxaa kale oo mudan in la is tuso in qaran & qaranimo kala duwan yihiin oo mararka qaar la isku qaldo. Qaranku wuxuu sameysmaa marka dad ay wadaagaan ama kasoo wada jeedaan meel si simana u leeyihiin dhaqan wadajir ah, luqad, taariikh, dareen wadajir ah oo saxa iyo qaladka lagu garto iyo in ay leeyihiin dhul deegaan u ah. Qaranimadase waxeey leedahay tan hore aan kusoo xusnay oo dhan oo lagu xeray dareen uu qofku u qabo dadkuu uu ka mid yahay oo isku xerta oo ka dhigta sidi jir wada damqada oo dareen wanaagsan sida farxada isla dareema si wadajir ah. Marka aan fiirino dagaalada ka dhacay caalamka badanaa waxeey ahaayeen kuwo ay sababtoodu laheyd qaranimo. Astaamaha qaranimo lagu garto waxaa ka mid ah in ay dadka ama bulshada wadaagto degaan ka dhexeeya, Ab/isir ka dhexeeya mararka qaar aan muhiim aheyn, luqad, dhaqan, diin, midnimo siyaasadeed iyo dan guud.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dowlad_Wanaag&oldid=202445"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Juun 2020, marka ee eheed 12:34.